Xallinta Khilaafaadka - Waaxda Ganacsiga ee Gobolka Washington
Bogga ugu weyn|U adeegida Bulshooyinka|Xalinta Khilaafaadka
Barnaamijka Xalinta Muranka
Barnaamijka Xallinta Khilaafaadka wuxuu bixiyaa beddel lagu xaliyo khilaafaadka caadiga ah iyada oo aan loo marin dhexdhexaadinta maxkamadda madaniga ah.
Barnaamijka Xalinta Muranka Ganacsiga ayaa bixiya maaliyad lagu taageero bixinta adeegyada xallinta khilaafaadka ee gobolka oo dhan. Xarumaha Xallinta Khilaafaadka (DRC) waxay siiyaan barnaamijyo kala duwan bulshooyinka, oo ay ku jiraan adeegyo war-bixineed oo taageeraya xasilloonida guryaha, xasilloonida qoyska, iyo dhaqanka iyo dib-u-soo-celinta bulshada ee diiradda saaraya sinnaanta. Adeegyada lagu bixiyo lacagtan waxaa ka mid ah tababar iyo aqoon hore oo ku saabsan arrimaha khaaska ah iyo dhexdhexaadinta:
Xannaanaynta ilmaha furriinka ka hor
Ururada deriska iyo ku xadgudubka axdiga
Khilaafka asaagga dhalinyarada
Muranka kireeyaha iyo kiraystaha
Dhibaatooyinka daryeelka waayeelka
Arrimaha goobta shaqada
Maxkamadaha maxalliga ah ayaa si joogta ah u amraya dhexdhexaadinta khilaafaadka madaniga ah ka hor inta aysan aqbalin codsiyada dhageysiga madaniga ah.
Waxaa lagu aasaasay Xeerka Hagaajinta Maxkamadda Gobolka Washington ee 1984 (RCW 7.75), waxaa hadda jira 21 DRC oo ka shaqeeya 25 degmo. DRC:
In kor loo qaado dhexdhexaadinta oo lagu beddeli karo nidaamka maxkamadda
Xalliyaan khilaafaadka ka dhex jira bulshooyinkooda
Ku dhiiri geli ka qaybgalka bulshada iyo iskaa wax u qabso barnaamijyada gudaha
In la baro shaqsiyaadka iyo ururada sida looga hortago khilaafaadka loona xaliyo khilaafyada si nabad ah
Horumari, wada xiriir oo baro dhexdhexaadinta hababka ugu fiican
Source: Qaraarka Washington
Xarumaha Xallinta Khilaafaadka (DRCs) ee ku yaal Washington oo dhan waxay yareeyaan culeysyada maxkamadaha, badbaadinta canshuur bixiyeyaasha, iyo kordhinta helitaanka caddaaladda dadka dhaqan ahaan liita. Sanadkii 2019 DRCs waxay dhexdhexaadisay 5,070 xaaladood, oo si guul leh u xallisay 64% iyaga. Intaa waxaa dheer, 90% macaamiisha ayaa sheegay in dhexdhexaadinta ay hagaajisay xaaladdooda.
Sannadlaha DRC -gu waxay ku habboon yihiin in ka badan $ 2 milyan oo saacadood oo mutadawacnimo ah, waxay si toos ah ugu adeegaan in ka badan 55,000 oo qof, waxay si dadban ugu adeegaan 200,000 oo qof oo noloshooda si togan u saameysay dhexdhexaadinta iyo adeegyada kale waxayna gaaraan in ka badan 7 milyan oo deggan Washington.
source Qaraarka Washington
Iskaashiyada Meelmarinta Sharciga Bulshada